Where "keywords" equals "community engagement"
Image (18)Document (1)New Zealand Major Design (4)
Displaying 1 to 23 of 23 results (Page 1 of 1)
He Ipukarea Ki Waikato - A Vision for the People - Chrissy MorehuFormat: New Zealand Major Design
Blending Community: Redesign of Upper Riccarton - Boyu Liu (Claire)Format: New Zealand Major Design
Halswell Ecopark and Greenbelt - Ellen ConleyFormat: New Zealand Major Design
Catalytic Transformation - Zhijun GuoFormat: New Zealand Major Design
2017 SoLA Vertical Studio Day 18Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 17Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 16Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 15Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 14Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 13Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 12Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 11Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 10Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 09Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 08Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 07Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 06Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 05Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 04Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 03Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 02Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
2017 SoLA Vertical Studio Day 01Format: ImageDate: 10th March 2017 Description: This year we decided that Vertical Studio would help a local community to achieve its goals. With 120 students and staff ready to work for the day, we had the capacity to make a real difference a...
Sustainable venison exportsFormat: Document
RECOLLECT is Copyright © 2011-2020 by NZMS | Page rendered in 0.6855 seconds